Full lifaaqan Exchangeable Worktable Sudee-4020CE - Shiinaha Dongguan Glorystar Laser
Features Product ● Iyada oo design ka buuxa xero ku wareegsanaa, yareeyo shucaaca laser oo looga fogaado dhaawac kasta oo farsamo. ● wax yaalaha worktable ku exchangeable si loo badbaadiyo loading iyo dejinta waqtiga, iyo in chieve hufnaan shaqo sare. ● hufan shiidi marsho iyo qalabka hayayaashii High, buuq yar yahay oo sax sare. ● SMC qaybaha pneumatic, gacanta smart si aad u hesho kaamil ah low-karka qanjaruufo. warshadaha Khusayso aad loogu isticmaalay dhammaan noocyada kala duwan ee warshadaha alaabta birta ah sida processing bir sheet, cookware iyo ...
● SMC qaybaha pneumatic, gacanta smart si aad u hesho kaamil ah low-karka qanjaruufo.
awood laser 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W (Ikhtiyaar)
aagga shaqaynta 4000 * 2000mm
mode gudbinta Pinion iyo hayayaashii, Driver Double
aragti, 10000 * 3600 * 2000
Previous: Full lifaaqan Exchangeable Worktable Sudee-6015CE
Next: Nooca Open Fiber Birta Laser Goynta Machine Sudee-3015E
2000w Fiber laser Jarida
2kw Jarida laser Fiber
Fiber laser magaabay wiil 2000w
2kw System laser Fiber